‘नेताहरू कम सुन्छन्, जाली फुट्ने गरी चिच्याउँ’
‘आज कति दिन हो अनसनको?’ ट्याक्सी चालकले सोधे।
‘आम्मामा, २० दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म के हेरेर बसेको छ सरकार?’ १५ वर्षदेखि राजधानीमा ट्याक्सी चलाइरहेका उनले भने।
डा. गोविन्द केसीले थालेको सत्याग्रह आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै शनिबार माइतीघरबाट निस्केको जुलुसलाई चासो र उत्सुकतासाथ नियालिरहेका झापाका ती ट्याक्सी चालकलाई आन्दोलनका अन्तरकुन्तर थाहा छैन। उनलाई ती सबै बुझ्ने चासो पनि छैन। जति थाहा छ, त्यतिमै विश्वासका साथ भन्न सक्छन्, ‘गोविन्द केसी हाम्रै लागि लडिरहेका हुन्। यी लोभीपापी नेताहरूले आखिरमा यी सन्तलाई मारेरै छाड्ने भए।’
‘के हो त उनको आन्दोलन?’
उनले आफूले बुझेसम्मका कुरा यसरी भने, ‘कुरा सिम्पल छ, यहाँ नेताहरू रुघाखोकी लाग्दा पनि बैंकक, सिंगापुर धाउँछन्, गरिबलाई भने बिरामी हुनु नै अभिशाप छ। सबैको राम्रो उपचार होस्, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी खुलोस्, अस्पतालहरू सहरमै मात्र नथुप्रिऊन् भनेर त यी डाक्टर भोकभोकै बसेका हुन् नि।’
पन्ध्र वर्षअघि आइए दोस्रो वर्ष फेल भएपछि ट्याक्सीको स्टेयरिङमा आफ्नो भविष्य खोज्न थालेका उनी केसीका मागमा राज्य यस्तै उदासीन रहे देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य पनि अन्धकार हुने बताउँछन्।
‘यी नेताहरूलाई त मतलबै भएन, विदेश गएर औषधि गराइहाल्छन्, मर्ने त हामी नै हौं,’ उनले भने।
माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने राजनीतिक नेताहरू जतिसुकै उदासीन रहे पनि सर्वसाधारणमा केसीले उठाएका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागप्रति समर्थन बाक्लिँदै गएको छ। एघारौं अनसनको २० औं दिन शनिबार माइतीघरबाट नयाँबानेश्वरसम्म निस्केको जुलुसमा बाक्लो उपस्थितिले यही देखाउँछ।
केसी अनसनका समर्थक उल्लेखनीय रूपले सहभागी उक्त जुलुस नयाँबानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
जुलुसमा सहभागीहरू धेरैले अनसनप्रति सरकारी रवैयाको आलोचना गरे। एउटा व्यक्ति उही मागका लागि पटकपटक अनसन बस्दा पनि सरकार भने जालझेलमै लागेको धेरैको टिप्पणी थियो। सर्वसाधारणको यो असन्तुष्टि शुक्रबारको घटनाक्रमले अझ बढाएको छ।
शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केसी आन्दोलनको मर्मअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने र अनसन तोडाउने सहमति भएको थियो। संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले अघिल्लो दिन गरेको संशोधन पुनर्लेखन गर्दै विधेयक पारित गर्यो। यही आधारमा शुक्रबार साँझसम्मै केसीले अनसन तोड्ने शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले समिति बैठकमा दाबी गरे।
केसीले भने उक्त विधेयक अस्वीकार गर्दै अनसन जारी रहने घोषणा गरे।
सरकारबाट मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन गरिएको व्यवस्थाप्रति केसीको आपत्ति छ। यो कानुन पारित भएपछि यसमा उल्लिखित आयोगले मेडिकल कलेजसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने र त्यही मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थालाई सम्बन्धन दिने भनी विधेयक तयार पारिएको छ। यसो गर्दा कानुन बन्नेबित्तिकै हतार–हतार आयोग गठन गरी त्यसले पनि उत्तिकै हतारका साथ लचिलो मापदण्ड तयार पारेर मनसायपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजलाई भटाभट सम्बन्धन दिनसक्ने केसीको आशंका छ।
‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न गठित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्र सम्बन्धन दिइनेछ भनी ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने’ केसीको अडान छ।
उनको यही अडानका कारण शुक्रबार रातिसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा चलेको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगियो। र, उनको अनसन पनि थप लम्बियो।
केसीले यसपालि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नै आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएका छन्। आन्दोलनको मर्मअनुरुप आफूले दिएका सुझाव र माथेमा कार्यदलको सिफारिस समेट्ने गरी उक्त विधेयक पारित हुनुपर्ने केसीको अडान छ। त्यो पूरा नभएसम्म अनसन कुनै हालतमा नतोड्ने दृढता उनले व्यक्त गरेका छन्।
यसअतिरिक्त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा डिन नियुक्ति, आइओएमको स्वायत्तता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा लगायत मागमा पनि छलफल अघि बढेको छैन।
केसीले आफ्नो ‘बटमलाइन’ सार्वजनिक गरिसकेपछि अब बल राजनीतिक दल तथा शीर्षनेताहरूको कोर्टमा पुगेको छ। केही सांसदहरू भने कुनै पनि कानुन बनाउनु संसदको अधिकारक्षेत्र भएकाले अनसनको बलमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै केसीको बदख्वाइँ गर्न पछि पर्दैनन्।
केसी समर्थकहरूको भनाइ भने बेग्लै छ। यो कानुन सरकार वा संसदले आवश्यकता देखेर तयार गरिएको होइन। केसीको पटकपटक अनसनकै बलमा यस्तो कानुन मस्यौदा गरिएको हो। यसलाई पारित गर्ने जिम्मा मात्र सांसदहरूको काँधमा आएको हो। त्यसमा पनि जालझेल गरेर मेडिकल कलेजहरूलाई नै पोस्ने गरी कानुन बनाउनु केसी अनसनकै अपमान भएको उनका समर्थकहरूको भनाइ छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सत्य र निष्ठाको लडाइँमा होमिएका केसीलाई छाडेर माफियातन्त्रलाई साथ दिने हो भने कसैप्रति विश्वास बाँकी नरहने बताए।
‘पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका पछाडि लुरुलुरु हिँड्ने सांसदहरू बुझ्नुहोस्, उहाँलाई यही जनताको बलले ढालेको थियो। तपाईंहरूले यसपालि पनि माफियाको साथ दिनुभयो भने अब तपाईंहरू पनि बाँकी रहनुहुने छैन,’ अधिवक्ता अर्यालले नयाँबानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा भने, ‘तपाईंहरू जनताको सेवा गर्न आउनुभएको हो भने डा. केसीको अभियानमा साथ दिनुस्।’
‘केसी अनसनमा नभएका भए अहिलेसम्म बाढीपीडितकहाँ पुगिसक्थे, उनीहरूको सेवा गर्नमा जुटिसकेका हुन्थे, तपाईंहरू त्यस्ता व्यक्तिलाई छाडेर माफियालाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सांसद सुरेन्द्र चौधरीले पनि मेडिकल माफियाविरुद्ध केसीको पक्षमा सबै जनता एकजुट हुनुपर्ने बताए।
‘सिटामोल खान नपाएर जनता मरेका छन्, यहाँ त्यसैको खरिद–बिक्रीमा करोडौं घोटाला हुन्छ। मेडिकल कलेजले अरबौं कमाएका छन्, गरिब जनता भने स्वास्थ्य सेवा नपाएर मरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी त्यसविरुद्ध एकजुट भयौं भने माफियातन्त्र तासको घरझैं ढल्ने छन्। म एक्लै भए पनि तपाईंहरूको साथमा छु।’
अभिनेता तथा फिल्म निर्देशक निश्चत बस्नेतले ‘नेताहरू कान कम सुन्ने हुँदा जाली फुट्ने गरी चिच्याउनुपर्ने’ बताए।
केही नेता, अधिवक्ता, चिकित्सक, नागरिक समाज, अभिनेता लगायत समाजको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति संलग्न यो जुलुसमा युवायुवतीको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो।
‘यतिका मान्छेले साथ दिइरहेका छन्, यी सबैको शुभेच्छाले पनि डाक्टरलाई मर्न दिँदैन,’ ती ट्याक्सी चालकले भने, ‘जित त सत्यकै हुन्छ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २८, २०७४, ०४:००:२१